Ahoana no hanatsarako ny lisitry ny lisitry ny sehatra SEO avy amin'ny loharanom-pahefana?
Lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny SEO dia ny fanohanan'ny tranonkala mahomby rehetra. Eny, miverimberina tsara ny rindran-damba tsara mba handroahana ny fanentanana ankapobeny ao amin'ny Search Engine Optimization amin'ny ambaratonga vaovao. Mazava ho azy, ilaina ny fananganana kalitaon'ny kalitaona dia mila fanoloran-tena betsaka sy asa mafy - tsy azo atao mihitsy izany mandritra ny roa alina amin'ny ohatra. Ny fananganana lisitra voajanahary SEO lisitra avy amin'ny loharanom-pahefana dia dingana iray maharitra sy maharitra, kanefa dia mandoa foana amin'ny toe-javatra rehetra izy.
Mialoha ny zavatra hafa, ny rakitra rehetra dia mahazatra raha misy ifandraisany amin'ny pejy Internet anao. Vokatr'izany dia matetika ny backlinks fantatra amin'ny anarana hoe backlinks ivelany. Ahoana no hanatsarana ny seo anao amin'ny lisitra backlinks amin'ny kalitao avo lenta? Mazava ho azy fa tsy mila miasa 24 ora isan'andro ianao ary fito andro isan-kerinandro mba hahazoana vokatra tsara voalohany. Raha ny marina, ho ampy ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny rohy momba ny SEO eo amin'ny 20-40 eo ho eo. Midika izany fa raha manana backlinks 5 voajanahary avy amin'ny tranonkala iray manan-danja miaraka amin'ny PA ambony (autoriteur pejy), ny PR (laharana), ary ny DA (fahefana tompon'andraikitra) dia tsara kokoa raha oharina amin'ny 50 backlinks amin'ny kalitao na ambany. Noho izany, raha mandinika ny lisitry ny lisitra SEO ao amin'ny tranonkalanao, zava-dehibe ny kalitao.
Tsy ilaina ny milaza fa miezaka ny hitsikera amin'ny Google amin'ny alàlan'ny fananana karazam-barotra azo jerena tahaka ny organika ary mety ahafahana mamarana mora kokoa ny vokatra tena mahaliana. Voalohany indrindra, rehefa hita fa misy orinasa mampiahiahy (naorin'ny rohim-pihavanana haingam-pandeha, ohatra) na hetsika mety ho fanitsakitsahana (toy ny fampiasana toeram-pivarotana rohy, fifanakalozana fifanakalozana fifandraisana,. Amin'ny ankapobeny dia manomboka amin'ny fandrosoana farany vao haingana ny fandrosoana, ary mora mora amin'ny vohikala iray manontolo voarara tanteraka amin'ny valin'ny fikarohana.
Mba hisakanana ireo vokatra ratsy tsy hitranga, avelao aho hampiseho aminao ireo tetika ara-paikady ampiasaiko mba hamoronana loharano goavambe. Raha ny amiko, dia faly aho manangana ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny seo blôgy mampiasa ireto fomba manaraka ireto: fametrahana hafatra, fanehoan-kevitra malefaka, fizarana hafatra mavitrika, ary asa tsara amin'ny tranokala mifandraika amin'ny Internet. Ireto ambany ireto ny fijeriko azy ireo, fohifohy.
Raha ny amiko, ny fandefasana hafatra dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fananganana rindrambaiko tsara. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia mandany fotoana vitsivitsy hanoratana votoaty tokana izay manome lanja ny olona. Amin'izany fomba izany, afaka mahatsikaritra mora foana ny bikabika organika matanjaka amin'ny alàlan'ny fanoratana lahatsoratra iray manan-danja ianao ary mahazo loharano miverimberina mankany amin'ny tranonkalanao ho valin'izany.
Andramo ny fanamarihana hentitra izay mety ho an'ny olona, ​​ka ny fanehoan-kevitrao dia manam-bintana kokoa amin'ny fahombiazan'ny fahaleovan-tena sy ny fankatoavana. Tadidio anefa fa ireo fitaovam-pikarohana lehibe tahaka an'i Google, i Yahoo sy Bing, dia mankahala backlinks spammy sy fanehoan-kevitra. Noho izany, mitandrema ary ataovy azo antoka fa tsy namela ny fanehoan-kevitra ianao.
Ny fizarana amin'ny hetsika dia fomba tsara ho an'ny backlinks kalitao. Zarao fotsiny ny lahatsoratrareo amin'ny iray amin'ireo tranonkala sosialy lehibe (na pejy forum). Raha manao izany ianao, dia tsy hahazoana backlinks afa-tsy fotsiny, fa miteraka fifamoivoizana sy fivoarana bebe kokoa - na amin'ireo sehatra sosialy, na ny tranokalanao na ny blôginao Source .